Mayelana NATHI - Yuxin Wright Industrial Prototype Co., Ltd.
Izinsiza kusebenza Zezokwelapha
Izingxenye Ezintsha Zamandla
Izingxenye ze-3D Zokuphrinta Zensimbi
Omunye wabakhiqizi abakhulu bokuphrinta okusheshayo eChina.Isevisi Yokuvikela Okusheshayo Okusheshayo ye-R & D.
YuxinUWright ozinikele ku-R & D kanye nokukhiqizwa kwama-prototypes ezimboni, futhi usebenzisa ngokuvumelanayo ubuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukisiwe nezinto ezintsha kumakhasimende ezimboni afunwayo. Inkampani yethu ingenye yabakhiqizi bezimboni abaphezulu kakhulu eChina futhi inokuncintisana okuqinile ezimakethe zaphesheya kwezilwandle.Siye saqongelela okuhlangenwe nakho okunothile emkhakheni wocwaningo we-high_precision processing technology wezinto ezintsha ezikhethekile zobunjiniyela bezimboni. Sinikeza izixazululo zesevisi ezilungiselelwe kakhulu kumakhasimende ethu asezingeni eliphakeme kufaka phakathi izinsizakalo ze-prototypes kanye neqoqwana elincane elincane lokukhiqiza okusheshayo.Izicelo ziba izingxenye ze-Auto, i-UAV drone, i-Consumer electronics, Idivayisi yokuxhumana, izingxenye zezindiza zomphakathi, imishini ekhethekile, ithuluzi lezokwelapha , Amathuluzi kagesi, imishini emisha yamandla, umkhakha we-Automation njll.
I-Kun shan Yuxin Wright Industrial Prototype Co, Ltd. ihlinzeka nge- insizakalo eyenziwe ngezifisoezinkampanini zezimboni zasekhaya nezomhlaba wonke. Amabhizinisi asezingeni eliphakeme lokuklama nokukhiqizwa okwenziwe ngezifiso anakhoukufunwa kwama-prototypes ahlukahlukene nezingxenye ezincane ze-batch nge-multi_spec. Ngokuya ngenqubo yokuklama nenjongo, noma ukuhleleka okwenziwe ngendlela oyifisayo, lolu hlobo lwesidingo lunezici ze “multi_spec, ubuningi obuncane, ikhwalithi ephezulu nesikhathi esifushane sokuhola", Esiyichaza ngokuthi"high_end funa ngokuhlukile”. Ngama-oda anjalo, kunzima ukulungisa ulayini wokukhiqiza ngokushesha wezinkampani zokukhiqiza ngobuningi, futhi futhi kunzima ukuhlangabezana nezidingo zekhwalithi zezigayo zendabuko.
Kusukela inkampani yasungulwa, sigxila ekwakhiweni nasekukhiqizeni izibonelo zezimboni futhi sisebenzisa ubuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukile kanye nezinto ezintsha emfunweni yabathengi. I-Kunshan Yuxin Wright Industrial Prototype Co, Ltd.yimboni ephezuluumenzi wesibonelongokuncintisana okuqinile kwamazwe omhlaba. Siqongelele ulwazi oluningi kufayela le-ubuchwepheshe bokuklama okuphezulu ngensimu entsha yocwaningo lwezinto zobunjiniyela ezintsha, ngokuqhubekayo ihlinzeka ngezixazululo zensiza ezenzelwe kakhulu ama-prototypes nokukhiqizwa okusheshayo kwe-batch small demand ehlukahlukene kubabizi be-high_grade abavela emikhiqizweni ye-3C, isesekeli sezimoto, isesekeli se-civil avation / imishini ekhethekile, insimbi yezokwelapha, amathuluzi kagesi, imishini emisha yamandla nezimboni ezisebenzelayo.
Kusukela inkampani iqala_uku, sabona futhi sabamba iqhaza ekuthuthukiseni imboni yokukhiqiza esheshayo. Sizinikela ngokuqhubekayo ukwakha isisekelo sokukhiqiza esisheshayo esikhulu kunazo zonke futhi esithuthuke kakhulu eChina, sisekela ukufunwa kwasekhaya nasemhlabeni wonke "okufunwayo okuphezulu" okufika ngesikhathi futhi ngokusheshangokukhiqizwa okungaphazanyiswa kwamahora angama-24 unyaka wonke.
Ikheli:Cha, 20, umgwaqo uZhipu, Qiandeng Town, Kunshan City, China